WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Ka Dambaysa La Soo Saxiixashada Lama Filaanka Ah Ee Bayern Kula Soo Wareegtay James Rodriguez – Kooxda.com
Home 2017 July Jarmalka, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Ka Dambaysa La Soo Saxiixashada Lama Filaanka Ah Ee Bayern Kula Soo Wareegtay James Rodriguez
WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Ka Dambaysa La Soo Saxiixashada Lama Filaanka Ah Ee Bayern Kula Soo Wareegtay James Rodriguez
July 11, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Bayern Munich ayaa saacado yar ka hor si lama filaan ah ugu dhawaaqday saxiixa xiddiga khadka dhexe ee xulka qaranka Colombia ee James Rodriguez iyada oo kula soo saxiixatay heshiis amaah ah oo ay fursad u leedahay in ay toos ula wareegto marka uu dhamaysto amaahda labada xilli ciyaareed ah.
Carlo Ancelotti Ayaa ah sababta ka dambaysa ee uu xiddigan ugu soo biiray kooxda Bayern Munich maadama uu doonayo in uu xiddigan ku xoojiyo weerarka kooxdiisa Xilli ciyaareedka dambe.
James Rodriguez ayaa awood u leh in uu ka ciyaaro booska No.10 isaga oo si cajiib ah caawiye uga noqon kara goolasha sidoo kale awood u leh in uu goolal badan dhaliyo.
is la mid ah James Rodriguez ayaa awood u leh in uu ka ciyaaro garabka bidix ee weerarka iyo waliba garabka midigba marka ay kooxdu weydo xiddigaha Arjen Robben iyo Franck Ribéry.
Hadii aynu eegno dhanka lacagta xiddigan ayaan kooxda ka khasaarin dooin wax ka badan 10 Milyan oo kaliya labada sano ee uu amaahda kula koogo kooxd laakiin hadii uu qanciyo shaki la,aan waxa ay miiska saari doontaa lacag badan.
Laakiin Kooxda Bayern Munich ayaa run ahaantii heshay xiddig hogaamiye ah oo waliba xiddiga koobaad ee xulka qarankiisa awoodna u leh in uu kooxda ku hogaamiyo ku guulaysiga koobabka.
Waxa si weyn loo filayaa in uu james dib u heli doono qaab ciyaareedkiisii fiicnaa niyad ahaan iyo waliba jir ahaa marka uu ka hoos shaqeeyo tababaraha reer Italy.
Filed in: Jarmalka, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino